“Difaaca dalkaaga waa muqadas” Madaxweynaha Somalia | Berberanews.com
Home WARARKA “Difaaca dalkaaga waa muqadas” Madaxweynaha Somalia
“Difaaca dalkaaga waa muqadas” Madaxweynaha Somalia
Muqdisho-(Berberanews)-Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa la hadlay boqollaal qof oo isugu soo baxay magaalada Muqdisho.
Dadka isu soo baxay waxay ku dhawaaqayeen hadallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, waxayna sheegeen in “aysan markan ka baqayn kooxda”.
Madaxweynaha oo la hadlay dibadbaxayaasha ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay dadkooda difaaacaan oo ay u istaagaan sidii ay naftooda u ilaalin lahaayeen.
“Waxaan idiin sheegayaa, dhallinyaroo, Hadaad iskuulka dhamaysaan, xageed u shaqa tageysaan? meel jidadka la idiinku xasuuqaayo. Waa in aad u istaagtaan difaaca naftiida, difaaca hooyooyiinkiina, difaaca deriskiina iyo difaaca dalkiina,” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
“Difaaca dalkaaga waa muqadas, difaaca dadkaaga waa muqadas, difaaca diintaada waa muqadas. dib uma noqoneyno, waxaanna hogaaminayaa dagaalka, aniga ayaana horey maraayo.”
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay sameyneyso ciidami difaaca shacabka.
“Shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa qeyb ka noqonaya, idinkana waa in aad qeyb ka noqotaan,” ayuu yiri Farmaajo.
Garoonka kubadda cagta ee Konis oo dibadbaxa uu ka dhacay waxaa isugu tagay dhallinyaro badan oo aad uga carooday weerarkii Soobe.
Hooyo dadkaas ka mid ahayd waxay tiri; “Soomaaliya ha noolaato, Al-Shabaab doonimayno, hooyo dile doonimayno, aabe dile doonimayno, caruur dile doonimayno, arday dile doonimayno, dad laaye doonimayno, Alshabaab doonimayno.
Sidoo kale dhallinyaro maryo gaduudan madaxa ku xirtay ayaa socod ku maray jidadka magaalada Muqdisho, waxayna xirayeen xarumaha ganacsiga ee furan ayagoo dadka ka dabanaya in mudaaharaadka ka qeybgalaan.
Dhanka gobollada, Magaalada Baydhabo waxaa isugu tagay boqollaal qof oo ku dhawaaqayay “Al-Shabaab doonimeyno,” waxaana la hadlay maamulka magaalada.
Dhanka Beledwayne dad isu soo baxay ayaa ku qeylinayay “Al-Shabaab ha dhaco,” waxayna kooxda ku eedeynayaan in qarixii muqdisho ay masuul ka ahaayeen.
Sidoo kale magaalooyiin kale ayay isu soo baxyo ka dheceen, waxaana la arkayay dad u badan dhallinyaro oo maryo gaduudan madaxa ugu xiran yihiin oo socod ku maraya jidadka.
Qarixii ka dhacay Soobe wuxuu ahaa midkii ugu xoogga badnaa ee sababay dhimashadii ugu badnayd. Sida dowladda ay shaaciyay 281 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 300 oo kalana way ku dhaawacmeen.
Previous articleGabaabsiga Biyaha Webiga Nile iyo Muranka Mandaqadda Geeska
Next articleC/casiis Samaale Oo Shacabaka Ugu Bushareyey In KULMIYE Aqbalayo Natiijada Koomiishanku Ku Dhawaaqo